Guddiga Gurmadka Qaxootiga Iyo Culimada oo Soo Bandhigay Deeqaha Lacageed ee Soo Gaaray [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Guddiga Gurmadka Qaxootiga Iyo Culimada oo Soo Bandhigay Deeqaha Lacageed ee Soo Gaaray [Sawirro]
Culimaudiinka magaalada Boosaaso iyo Guddiga Gurmadka Qaxootiga Yaman ayaa xalay Masjidu Rawda ku qabtay kulan ay kuso Bandhigeen Lacagaha dadka soomaaliyeed ee dalka dibadiisa iyo gudihiisa ku sugan ay soogaarsiiyeen,waxyaabaha u qabsoomay Guddiga, Xaaladda qaxootiga yaman,uguna mahadceliyay dadweynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay Gurmadka,kuna nool gudaha iyo dibada.
Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka Yaman Sheekh Yuusuf Daad oo Daahfuray kulanka,ayaa sheegay in Guddiga la aas-aasay xilli xaalad adag ay haysatay qaxootiga kaso qaxay dalka Yaman.
Sheekh Yuusuf Daad
‘’Guddiga waxaa la Aas-aasay iyada oo aan Xerada laga qadayn,lagana quraacan oo maalin iyo habeen aysan waxba cunin,waxna cabin,waxaana loo aasasay dhibaatada jirta awgeed sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa’’Ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka Yaman Sheekh Yuusuf Daad.
Mar uu ka hadlayay tirada dadka soo gaaray Bosaso ayaa wuxuu yiri‘’…Waxaa Bosaso yimi dad gaarya 9,691 qaxooti ah oo isugu jira Soomaali,Yamaniyiin,Kenyaati,Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan,waxaana dadkaa u Gurmaday Dawlada iyo dadweynaha reer Puntland’’.
C/fataax maxamed sugule oo ah madaxa xarunta cuna karinta qaxootiga, ahna xubina ka mid ah gudiga qaxootiga dalka yamen ayaa isna ka warbixiyay habka cunada dadkaas loo siiyo, iyo noocyada cunada la siiyo, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku tilmaamay in cunada la siiyo ay tahay mida ugu saraysa ee qof cuno.
Maxamed Cabdi waabari oo ah ku xigeenka labaad ee ee gudoomiyaha rugta ganacsiga , ahna xubina ka mid ah gudiga qaxootiga dalka yamen ayaa ka warbixiyay dowrka baaxada leh ee ay ka qaateen Ganacsatadu taageerida qaxootiga kasoo qaxaya dalka yamen.
Sheekh Daahir Owcabdi oo ka mid ah Culumada ugu waawayn Soomaaliya ayaa sheegay in Taariikhda ay galayso sida shacabka reer Puntland ay ugu Gurmadeen walaalahooda kaso qaxay Yaman.
Sheekh Daahir ayaa sheegay inaysan jirin wax dhaqaale ah oo kaso gaaray Dawlada Federaalka Soomaaliya,wuxuu u duceeyay dadweynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay Gurmadka loo fidiyay dadka kaso qaxay Yaman.
Guddoomiye ku xigeenka Minhaaj Ciise Siciid Maxamed ayaa sheegay in shacabka reer Puntland ay ka dhabeeyen Hinsidahii ahaa reer Puntland ha isku tashteen,taasi oo ula jeeday sida reer Puntland ay ugu wada istaageen caawinta walaalahooda kaso qaxay Yaman.
Intii kulanku socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay Sawiro ka tarjumaya xaaladda Qaxootiga iyo Gurmadka loo fidiyay,waxaana Culumadu ay soo Bandhigeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay Gurmadka.
Hoos ka Magacyada dadkii wax soo diray iyo dalalka iyo deegaanada wax laga soo diray
dadka lacagta bixiyay Wadamada iyo deegaamada lacagaha laga soo kala diray
Wadamada iyo deegaamada lacagaha laga soo kala diray